Zakaiosy - Wikipedia
Nasain'i Jesoa nidina avy teny amin'ny hazo i Zakaiosy, sary nataon'i Niels Larsen Stevns.
I Zakaiosy na Zake dia olona resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly kristiana, izay voalaza fa mpamory hetra niova finoana ka lasa mpianatr'i Jesoa efa talohan'ny fanomboana azy amin'ny hazo fijaliana (Lio. 19. 1-10).
Atao hoe Ζακχαῖος / Zakchaios izy amin'ny teny grika fa Zakkai (izay midika hoe "marina" na "madio") kosa amin'ny teny arameana. Amin'ny teny frantsay dia atao hoe Zachée na Zacchée izy ka avy amin'izany ny fanoratana hoe Zake ao amin'ny Baiboly katolika malagasy. Ny Baiboly protestanta malagasy kosa dia manoratra hoe Zakaiosy.
Tahaka an'i Matio Levy dia isan'ireo mpianatr'i Jesoa izy, ka talohan'ny fiovam-pinoany hanaraka an'i Jesoa dia mpamory hetra i Zakaiosy, izany hoe izy no nandrindra ny fakana hetra ho an'ny Romana teo amin'ny Jiosy. Mba hahatonga azy ho afaka ho mpianatr'i Jesoa dia nanaiky hizara ny antsasaky ny fananany no an'ny mahatra izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakaiosy&oldid=975674"
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2019 amin'ny 16:24 ity pejy ity.